Toekaren i Madagasikara
Tanàna any Madagasikara
Italia (faritra ara-jeografia)
Fanambarana Iraisam-pirenena mombanny ZonOlombelona
Boky faharoanny Tantara
Boky voalohanny Tantara
Boky ara-tantara (Baiboly)
Olika voafintina anaty
Ny abidy malagasy dia abidy ampaisaina rehefa manoratra amin ny fiteny malagasy. Io abidy io dia avy amin ny abidy latina, ampiasaina amin ny fanoratana ny ankabeazan ny fiteny, tsy ao Eorôpa ihany, fa aty Afrika sy any Amerika koa. Ny abidy mala ...
Andriamanitra (finoan-drazana malagasy)
Amin ny Ntaolo malagasy dia atao hoe andriamanitra na zanahary ireo fanahy manana hery sy fahalalana ary hasina ambony lavitra noho ny an ny fanahy hafa sy ny an ny zavaboary rehetra. Amin ireo zanahary ireo dia inoan ny Ntaolo malagasy ny fisian ...
Ny Antankarana na Antankaraña, Antakaragna, Tankarana dia vondrom-poko ao amin ny tendro avaratr i Madagasikara, ao amin ny Faritanin Antsiranana. Monina amin ny faritra lavalava manaraka avy eo Ampasimena mankany Vohimarina ny Antankarana. I Ant ...
Taminny 6 septambra 1952 tao Antananarivo no namoronanny poeta sy mpanoratra ary mpanao gazety 15 mirahalahy ny HAVATSA-UPEM, dia: Daud Ratsarazaka Nivo-Hary Odéam Rakoto Elie Charles Abraham Flavien Ranaivo Ener Lalandy Raymond Abraham Régis Raj ...
Ny tononkalo dia karazan-dahabolana na lahatsoratra natao andalana mifanarakaraka misy ngadona sy firindrana ary fitsipika mifehy ny fiafaranny andalana tsirairay mbaminny fomba hahakanto azy sady miompana aminny lohahevitra iray no natao hiantef ...
DadaRabe dia mpanoratra malagasy teraka taminny taona 1968 tao Antananarivo. Nianatra teny Ankatso ary nivoaka ho dokotera. Nanohy fianarana tany Frantsa izy ary nahazo ny mari-pahaizana manokana momba ny "Psychiatrie". Niverina tao Madagasikara ...
Ny lovantsofina dia ny fampitana mitohy ny singan-kolontsaina iray na maro mandritra ny tantara hatraminny zava-mitranga mpanorina na hatraminny zava-nitranga taminny fotoana lasa lavitra dia lavitra. Izany lova tsy azo tsapain-tanana izany dia m ...
Fredy Jaofera izay Rakotomalala Eric Fredy Jaofera no anarany feno dia zafikelin i Fredy Rajaofera ary samy poeta izy mianaka. Zanaka lahimatoan Itompokolahy Rakotomalala Eugène Louis sy Itompokovavy Rajaofera Elise izy. Mpirahalahy fotsiny ry za ...
Ny Bara dia vondrom-poko malagasy any afovoany-atsimon i Madagasikara, ao amin ny faritra Ihorombe sy Atsimo Andrefana ary Anosy. Toerana midadasika no misy azy ireo, voafaritry ny renirano Zomandao any avaratra, ny faritra onenan ny Tanala any a ...
Ny hoe Epistily na Taratasy na Epistola dia sokajin-dahatsoratra miendrika taratasy ifandefasana ka ilazana indrindra ireo boky ao amin ny Baiboly izay manana izany endrika izany mba hifampiresahan ny mpanoratra amin ny olona na fiangonana iray n ...
Ny angano dia fitantarana zavatra tsy nisy nefa namboarina ho toy ny nisy ary natao hanatsoahana fananarana, na fitantarana zava-nitranga tokoa. Karazana lahabolana tsotra, lava ary miendrika tantara foronina noho ireo dingana hita ao anatiny sy ...
I Dox na koa fantatra taminny anarana hoe Jean Verdi Salomon Razakandraina dia teraka taminny 13 Janoary 1913 tao Manankavaly. Azo lazaina ho anisanny poety malagasy fanta-daza indrindra aminizao andro izao i Dox.
Ny fanorona dia lalaon-tsaina nenti-paharazana malagasy. Olon-droa no mifanandrina aminizany ary mandany ny vatonilay mpifanandrina ny tanjona, toy ny ady. Rehefa maty kosa ilay mpifanandrina iray, dia azo avela koa dia miroso aminny fomba filala ...
Ny PlayStation 4 na PS4 dia ny fahavalo taranaka lalao video console avy aminny Sony Solosaina fialam-Boly. Nanambara toy ny mpandimby ny PlayStation 3 nandritra ny fanolorana taminny 20 febroary ny taona 2013. Ny PlayStation 4 mifaninana aminny ...
I Andry Rajoelina no iantsoana and Rajoelina Andry Nirina teraka tamin ny 30 Mey 1974. Mpanao pôlitika malagasy ary mpanana radio sy televiziôna. Izy no ben ny tanànan Antananarivo nanomboka ny 12 Desambra hatramin ny 3 febroary 2009 mialoha ny n ...
Fifidianana filoham-pirenena ao Madagasikara 2013
Ny fifidianana filoham-pirenena ao Madagasikara ny taona 2013 dia ny fifidianana ny filoha voalohanny Repoblika Fahaefatra. Nohonny tsifanekena avy aminny Fianakaviambe iraisam-pirenena ary ny fanajanonana ny fanampiana ara-bola vokatrizany, dia ...
Marc Ravalomanana no filohanny Repoblikani Madagasikara nanomboka ny 6 Mey 2002. Teraka tao Imerinkasinina tao Antananarivo izay renivohitri Madagasikara, manambady Lalao Ravalomanana ary manan-janaka efatra. Na teo aminny resaka politika na tami ...
Ny wiki dia fitaovana ahafahana mandavorary votoatinny sehatra iray aminny tranonkala ka ahafahanny mpitsidika rehetra nomena alàlana hanova ny votoatinny pejy ao anatiny. Manamora ny fiaraha-manoratra lahatsoratra ny wiki, koa rehefa olona marom ...
Tompondaka eran-tany aminny tsipy kanetibe 2016
Ny tompondaka eran-tany faha-47 aminny tsipy kanetibe dia natao tao Antananarivo taminny taona 2016. Fifaninanana tsitelotelo sy kendry no natao.
1935 – Bob Denver, Amerikanina mpilalao maty taminny 2005 1959 – Rigoberta Menchú, Goatemala mafàna fo, Loka Nobel laureate 1913 – Richard Nixon, mpanao politika Amerikana, faha-37 Filohanny Etazonia maty taminny 1994 1931 – Algis Budrys, litoani ...
Ambohidrabiby dia tanàna miorina eo antampon-tendrombohitra. Ara-panjakana, ao anatinny Kaominina Ambohidrabiby, distrika Avaradrano, faritra Analamanga ary faritanin Antananarivo io tanàna io. Tao anatinny Kaominina Talata Volonondry izy talohan ...
Salegy Ny salegy dia mozika sy dihy avy ao Madagasikara izay nipoitra avy aminny faritra avaratra sy avaratra andrefani Madagsikara. Baoejy Ny baoejy na bahoejy dia karazana mozika avy ao Madagasikara. Any avaratri Madagasikara, indrindra ny fari ...
Ny afindrafindrao dia dihy malagasy vokatry ny fakan-tahaka ny dihy vazaha atao hoe quadrille izay dihiezina aminny mozika malagasy, matetika tanterahinolo-maro mandeha tsiroaroa, lahy sy vavy, ka ny vavy eo aloha fa ny lahy ao aoriana mihazona n ...
Ny Makoa dia foko malagasy monina ao amin ny morontsiraka avaratra andrefan i Madagasikara. Ny mponina ao ampovoan-tanin i Madagasikara dia miantso azy ireo hoe Masombika. Taranak olona banto namidy ho andevo aty Madagasikara ny ankamaroan izy ir ...
Isanny fomban-drazana iray mampiavaka ny Malagasy ny f amadihana, izay antsoina koa hoe famonosan-damba. Ny famadihana dia fety atokanny Malagasy hahatsiarovana ireo efa maty. Anehoana ny fifandraisana mbola misy eo aminny velona sy ny maty izy, ...
I Paul Bert Rahasimanana na i Rossy dia mpihira sy mpitendry mozika malagasy teraka taminny 20 septambra 1960. Milalao zavamaneno maro izy ary angorodao no tena ahafantarana azy. Nanangana ny tarika mitondra ny anarana koa hoe Rossy ; tarika mana ...
Zalenn, tena anarany Christophe Zanellato, teraka taminny 13 aprily 2000 Tany Toamasina, avy amina reny malagasy sy raim-pianakaviana italianina. Izy, mpamorona ary mpamokatra mozika.
Akonny lanitra Tempo gaigy Boy Black Samoela Taa Tense Henri Ratsimbazafy Raindimby Mr Sayda Dadi Love 18.3 Rambao Freddy Ranarison Jonny rafa Ramora favori Jerry Marcos Dédesse Lion hill Ventsonandroy Jaojoby Tsiliva Zeze Mahanoro Lalatiana Voah ...
Zafimahaleo Rasolofondraosolo no tena anarany. Teraka ny 26 Mey 1954 tao Marolambo izy. Mpanoratra, mpamorona sady mpihira izy ary isanny nanorina ny tarika Mahaleo niaraka tamini Dadah taminny taona 1972 raha nanafana ny tolonny mpianatra teny A ...
==RAP,Rnb== Dia tsy kolotsaina Malagasy fa kolotsaina avy any ivelany ary ny vohizinireo /* ARTISTE MALAGASY *\_ maro mba ampitombo be kokoa ny zavakanto eto MADAGASCAR Maro mpakafy izy ankehitriny Ao Rnb Ary maro ihany koa ireo mpanakanto MALAGAS ...
Bodoharisoa Razafindrazaka: fantatra aminny anarana hoe Bodo dia Mpanakanto Malagasy teraka taminny 21 Jolay 1966. Fantatra ihany koa amin ny hoe "La Diva De La Chanson Malgache".
Ny tarika Voninavoko dia Atoa Rakotomavo Gabriel izay fantatra koa aminny anarana hoe "Dadagaby" Voninavoko no namorona azy. Iza no malagasy tsy mahalala fara-faharatsiny iray anireto hira ireo: Zaza mitomany, Voninavoko, Mananjary, Tsiriry, Zana ...
Ny tarika Vaovy dia tarika avy any Androy natsangani Jean Gabin Fanovona taminny taona 1974. Io anatana io dia avy aminny anaranny karazan-kazo mafy tsy hita raha tsy eto Madagasikara.
Anarana: ANDRIAMANANTENA Fanampinanarana: Georges Teraka tamin’ny: 1 oktobra 1923, Tao Ambohipotsy - Antananarivo Nodimandry: 11 septambra 2008 Ray: ANDRIAMANANTENA Gaston, Mpitandrina efa-maty Reny: RAZAFINDRAFARA efa maty Fiaviana: lafin-dray: ...
I Kanaana na Kanana na Kanahana dia faritra tao andrefani Jordana izay resahina ao aminny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly sady anaranny razambenireo mponina tao aminio firenena io koa ny hoe Kanana na Kanaana na Kanahana, ka izany no iantsoan ...
Ny fivavahana dia fanao sy finoana mampifandray ny fiainanny olombelona amin ny masina, finoana ny fisian ny hery ambony noho ny olombelona, dia finoana ifampizaran ny fianakaviamben ny mpino. Miteraka fanao ara-pitondrantena, fomba fijery manoka ...
Jonny rafa na Andriamanankoavy Jonny dia nianatra momba ny sokitra tao aminny École Nationale Supérieure des Beaux-Arts ao Paris. Fa hoy i Jonny rafa raha manazava momba ny asany izy: "Voalohany aloha dia ny Art no enti-mikolokolo sy mampiroborob ...
Rakotonomenjanahary Dieudonné no tena anarani Ndrematoa mpanao tantara an-tsary malagasy, teraka tamin’ny 16 oktobra, ny taona 1956 tao Antananarivo.
I Tovo JHay dia mpanankanto malagasy fantatra amin ny maha mpamorona, sy mpiangaly ny hiranny fo, araka ny maha hiranny fo azy izay dia ny fo avy hatrany no voadona rehefa hiantefanilay mozika, Manana fomba fihira tsy dia faheno sy fahita loatra ...
Ny Mpikambana Mavitrika dia malaza grika hip-hop/ambany bap tarika fantatra noho ny politika songwriting. Ity ny tarika iray izay navoaka voalohany grika hip-hop album. Aminizao fotoana izao izany dia ahitana ny B. D. Foxmoor sy Sadahzinia.
Ny fady na faly, eo amin’ny kolontsaina malagasy, dia ireo zavatra raràna tsy azo tanterahina araka ny fepetra napetraky ny fomba amam-panao. Mety hisy fady momba azy ny olona na ny toerana na ny asa atao na ny zavatra iray ka miovaova isam-parit ...
Ny volana Aprily na Avrily no volana fahefatra ao aminny tetiandro gregoriana sy joliana. Avy aminny teny letina hoe aprilis izay anaranio volana io tao aminireo Romana taminny Andro Taloha ny teny hoe Aprily. Ireo zavatra nitranga taminity Aprily.
Andrianarivelo Rahajanirina Hery dia mpanoratra malagasy. Aina Nirina no solon’anarana entiny amin’ny maha mpanoratra azy Teraka ny 03 jolay 1970 tany Toamasina.
Régis Rajemisa Raolison
Régis Rajemisa Raolison dia mpanoratra malagasy nisongadina taminny fanoratana boky fampiarana ny fitsipiky ny teny malagasy toa anIsambilo, Fiteny mamiko, ny fanoratana tononkalo, sy rakibolana.
Ity pejy ity dia mamintina ireo zava-nitranga manamarika indrindra ny tantaran i Madagasikara, dia ilay nosy ao amin ny ilany andrefan ny Ranomasimbe Indiana, ao atsimo-atsinanan i Afrika.
RAZAFINDRAZAKA Voahangiharisoa no tena anarany. Renim-pianankaviana. Manan-janaka telo lahy izay samy efa raim-pianankaviana daholo. Efatra mianadahy no zafikeliny aminizao fotoana izao, dia i Mandresy 7 taona - Mendrika 5 taona - Ny Tsiky 3 taon ...
Mamy Ralaivita dia mpihira sady mpamoronkira. Fony izy 12 taona dia nanangana tarika, vokatry ny nofinofy niarahana taminireo mpiray tam-po aminy sy ireo namany nandritra ny fialantsasatra indrindra indrindra. Taminizany fotoana izany no nitsanga ...
Mahaleo, midika hoe mahaleo-tena dia tarika mpihira iray avy ao Madagasikara. Taminny taona 1972, nandritra ny tolonny mpianatra no niforonanny tarika izay ahitana ani Dama, Dadah, Bekoto, Charles, Nonoh, Fafah ary Raoul. Nitondra tsioka vaovao t ...
Ny Antsaly dia tarika maneho ny hira nentin-drazana tao aminny faritra afovoani Madagasikara. Ny vohikalany: Ny Antsaly dia tarika naneho ny hira nentin-drazana tao aminny faritra afovoani Madagasikara. Tsy latsa-danja koa anefa ireo tarika toy n ...
Jex Mozika dia mpamorona, mpiangaly sy mpandrindra mozika ary mpihira. Natao ho an’ny sahalan-taona rehetra ny hirany. Hajaina RAVOAJA no tena anarany, mpikambana tao amin’ny tarika Tohy izy ny taona 1997 ka hatramin’ny taona 2001. Taorianizay iz ...
Fanambarana Iraisam-pirenena mombanny ..